Lix dal oo African ah oo aan weli laga helin Coronavirus
SOUTH SUDAN - Dalka South Sudan ayaa kasoo kabanaya lix sano oo dagaal sokeeye ah, iyo heer sare oo ah baahi iyo jirrooyin, oo ay dheer tahay kaabayaashii oo maqan, waxaana khubarada caafimaadka ay ka cabsi qabaan in fayruska uu burburin karo.
BURUNDI - Dalka Burundi, oo isu diyaarinaya doorasho guud oo dhacda bisha May, ayaa mas’uuliyiinta waxay sheegeen in inaanu cudurka soo gaarin ay uga mahad-celinayaan Allah.
SAO TOME AND PRINCIPE - Dalka Sao Tome and Principe, oo ah jasiirad yar ayaan werin wax kiisas ah, sababtoo ah ma awooddo inay sameyso baaritaanada cudurka, sida ay sheegtay Anne Ancia oo ah wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee WHO.
MALAWI - Dalka Malawi, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka, Joshua Malango ayaa dhinac isaga riixay cabsida la xiriirta in sababta Malawi aan looga diiwaan gelin kiisas coronavirus ah ay tahay ayada oo aysan haysan qalabka lagu baaro cudurka.
LESOTHO - Dalka Lesotho, oo ah boqortooyo gebigeedba ay ku hareereysan tahay South Africa, kuna nool yihiin laba milyan oo qof, ayaa Isninntii waxaa la geliyey go’doon buuxa, inkasta oo aan laga diiwaan gelin wax kiisas ah oo la xiriira cudurka.
COMOROS - Dalka Comoros ee ku yaalla Badweynta India, kuna beegan inta u dhaxeysa Madagascar iyo Mozambique, ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxaan laga helin wax kiis ah oo la xiriira cudurka coronavirus.